Nagu saabsan - Beijing Anbesec Technology Co., Ltd.
Anbesec Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2015. Tan iyo markii la aasaasay, shirkadu waxay u heellan tahay bixinta habab hal-ku-ilaalin dabka iyo qandaraas siinta mashaariicda ka hortagga dabka. Markii ay shirkaddu koraysay, waxaan soo uruurinnay koox khubaro khibrad u leh ah oo ka tirsan warshadaha si ay macaamiisha u siiyaan xalal injineernimo xirfadeed iyo alaabooyin iyo qalab dab oo tayo sare leh.
Khadadka wax soo saarka ee shirkadda waxaa ka mid ah: nidaamka digniinta dabka madaniga ah, qalabka digniinta dabka warshadaha, nidaamka dab-demiska warshadaha iyo qalabka ka hortagga dabka. Beijing Anbesec Technology Co., Ltd. oo ah laanta Hong Kong Anbesec Technology Co., Ltd., waxay lashaqeysaa warshado badan oo xirfadlayaal gudaha ah si ay u siiso macaamiisheena alaab iyo adeegyo tayo sare leh, waxayna ka faa'iideysataa waayo-aragnimada horumarinta suuqyada caalamiga ah ee hodanka ah. Kong Anbesec si ay ugu soo bandhigto sumcad ilaalinta dabka oo tayo sare leh adduunka oo idil.
Shirkadeena waxay ku adkeysaneysaa mabaadii'da adeegga ee "Daacadnimada marka hore, Macaamiisha ugu horreysa". Intii lagu gudajiray hawlgalkan, shirkaddu waxay uruurisay tiro badan oo macaamiil iyo ajnabi isugu jira oo la isku halleyn karo iyo la-hawlgalayaasheeda, waxayna si joogto ah ugu heellan tahay hal-abuurnimada alaabooyinka iyo adeegyada xagga shaqada.
Qaabdhismeedka saldhig soo-saarka ayaa ka badan 28,000 mitir laba jibbaaran wadar ahaan. Oo leh in ka badan 10 khadadka wax soo saarka oo ay ku jiraan khadadka wax soo saarka LHD. Alaabooyinka waxaa ogolaaday FM, UL. waxaana si weyn loogu iibiyaa koonfurta Aasiya, Afrika, bartamaha Bariga iyo Ruushka.
Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Khadkeena Alaabta